यी हुन् ‘ए’ डिभिजन लिगमा उत्कृष्ट खेलाडी, कसले कति रकम पाए ? | Ratopati
यी हुन् ‘ए’ डिभिजन लिगमा उत्कृष्ट खेलाडी, कसले कति रकम पाए ?
काठमाडौं । शहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा मच्छिन्द्र क्लब च्याम्पियन बनेको छ । दशरथ रंगशालामा शनिबार भएको लिगको अन्तिम खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई १–० गोलले हराउँदै मच्छिन्द्र च्याम्पियन बनेको हो । मछिन्द्रले पहिलो पटक लिगको उपाधि जितेको हो ।
मच्छिन्द्रले आर्मीका विकास तामाङको आत्मघाती गोलमा सहयोगमा उपाधि जित्यो । बराबरी गरे पुग्ने अन्तिम खेलमा आर्मीले खासै खेल्न सकेन । ३३औं मिनेटमा मच्छिन्द्रका रन्जित धिमालले फ्रिकिकमा बल बचाउने क्रममा विकासको प्रहार आफ्नै पोस्टमा छिरेको थियो । सोही बल बचाउने क्रममा गोलरक्षक बिकेश कुथु घाईते भएपछि खेल सात मिनेट रोकिएको थियो । घाइते भएर नसक्ने भएपछि विकेशलाई सिधै अस्पताल लगिएको थियो ।
उपाधिसँगै मच्छिन्द्रले ५० लाख रुपैयाँ पायो । उपविजेता आर्मीले ३५ लाख रुपैयाँमा चित्त बुझायो । तेस्रो मनाएको मनाङले २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त ग¥यो । मंसिर २८ गतेदेखि सञ्चालित लिगमा १४ टोलीले भाग लिएका थिए । सरस्वती रेलिगेसनमा प¥यो । विजेतालाई उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल लगायतले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।
लिगका उत्कृष्ट खेलाडीहरु
गोलरक्षक – दिप कार्की मनाङ एक लाख ५० हजार रुपैयाँ
रक्षक – अनन्त तामाङ थ्री स्टार १ एक लाख ५० हजार रुपैयाँ
मिडफिल्डर– विशाल राई ‘बी’ मछिन्द्र एक लाख ५० हजार रुपैयाँ
स्ट्राइकर – भरत खवास आर्मी एक लाख ५० हजार रुपैयाँ
प्रशिक्षक – प्रवेश कटुवाल मछिन्द्र एक लाख ५० हजार रुपैयाँ
फेयर प्ले टिम– थ्रीस्टार क्लब एक लाख रुपैयाँ
युवा खेलाडी – दर्शन गुरुङ एनआरटी एक लाख रुपैयाँ